Iran: Herisetra, Vehivavy Mpitandro Filaminana & Baolina Kitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2018 17:32 GMT
Araka ny filazan'ny haino amanjery sy ireo bilaogy marobe, nidaroka sy nisambotra olona am-polony ny mpitandro filaminana tao Iran taorian'ny ezaky ny vondrom-behivavy mafàna fo iray hanao fihetsiketsehana itakiany zo ara-dalàna bebe kokoa teo aminà kianja iray ao Téhéran renivohitra ny Alatsinainy 12 Jona. Maro ireo bilaogera nitatitra ity hetsika ity ary naka sary ny fihetsiketsehana.
Namoaka sary tsara kalitao avy amin'ilay hetsipanoherana nilamina nampiasàna herim-pamoretana i Kosoof, mpanoratra bilaogy an-tsary iray hafa. Hoy izy:
Milaza i Sharbighese fa natahotra izy ary tokony nanomana fanadinana saingy nanapa-kevitra ny hanatevin-daharana anatin'ilay fihetsiketsehana. Milaza izy fa resin'ireo mpitandro filaminana ny isan'ireo olona sahy nihiaka hoe “Olombelona isika kanefa tsy manan-jo” na koa hoe “Mitaky ny fanafoanana ny lalàna manohitra ny vehivavy izahay” (rohy maty). Tsy nahafehy ny vahoaka ny mpitandro filaminana, maro ireo olona mijery anay saingy matahotra ny hanohana ny hetsika…
Resy tamin'ny fihodinana voalohany nifanandrinany tamin'i Meksika i Iran: 3 sy 1. Tahaka ny mahazatra dia miezaka mandinika ilay lalao sy mijery ireo tompon'andraikitra tamin'ity fahareseny ity ireo bilaogera Iraniana!
Milaza i Legofish fa tsy nampiseho ireo mpanohana Iraniana teny amin'ny kianja ny Fahitalavitra Alemàna, afa-tsy lehilahy iray resin-tory, na dia tamin'ny fotoana nahatafidiran'i Iran baolina iray aza. Milaza ilay bilaogera fa mety ny governemanta Iraniana mihitsy no nangataka azy ireo tsy hampiseho izany (rohy maty). Niteny koa izy fa araka ny filazan'ireo namany any Alemaina dia vitsy ireo Iraniana ao amin'ny manodidina no manohana ny lalaon'ny ekipam-pirenena Iraniana.
Miteny i Parsa fa naniry ny hampiditra baolina iray tamin'io lalao io ny ekipantsika ary nanao lalao fiarovan-tena. Nanampy koa ilay bilaogera fa fahavoazana goavana izany ary marefo eo amin'ny fiarovantenany ny ekipantsika (Persiana).
Milaza i NickAhang, bilaogera & mpanao sariitatra monina ao Kanadà, fa tsara kanefa tsy tena mahay ny mpanazatra antsika, Branco. Samy nanakiana an'i Ali Daei, kapiteny Iraniana, ho efa diso antitra loatra raha hilalao, ireo bilaogera sy ireo Iraniana maro hafa. Nanampy ilay bilaogera fa raha te hanome voninahitra an'i Daei (mpilalao, 37 taona) izy dia afaka alainy ho mpanampy azy izy. Mpilalao mahay saingy anatin'ny ekipam-pirenena (Persiana) monja i NickAhang addsAli Daei.
Kanefa misy faharesena goavana kokoa nòho ny sasany. Milaza i Abbas Maroufi, bilaogera sady mpanoratra avy ao Alemaina, fa tsy ny faharesentsika tamin'ny baolina kitra no tena loza, fa ny fidarohana vehivavy ataon'ireo vehivavy mpitandro filaminana (Persiana).